Ungalutshintsha njani ulwimi ku-Ubuntu 18.04 | Ubunlog
Zininzi iikhompyuter ezisasazwa ngo-Ubuntu njengenkqubo yokusebenza. La maqela ahlala enofakelo oluqhelekileyo olunxulumene nelizwe lemvelaphi. Nangona kuyinyani ukuba eSpain kukho iinkampani ezibonelela ngolu hlobo lwekhompyuter, kukwakho neenkampani zangaphandle ezenza okufanayo.
Ingxaki enye kuye nawuphina umsebenzisi ofuna ukuthenga izixhobo zangaphandle ngumba wolwimi. Iqela langaphandle liya kuba noBuntu ngesiNgesi njengolwimi olungagqibekanga, kodwa oko Yinto esinokuyitshintsha ngaphandle kokucima nokufaka Ubuntu kwakhona.Emva koko siyakuxelela Ungalutshintsha njani ulwimi ku-Ubuntu 18.04 ngaphandle kokufaka kwakhona inkqubo yokusebenza. La manyathelo aya kuba luncedo nakwabo bafuna ukufunda ulwimi olutsha kwaye bafuna ukutshintsha ulwimi lwenkqubo yabo yokusebenza.
Kuqala kufuneka siye Uqwalaselo kunye nakwifestile ebonakalayo khetha isithuba "Ummandla kunye neelwimi". Emva koko kuya kuvela into efana nale ilandelayo:
Ngoku kufuneka sitshintshe amacandelo amathathu avela ngolwimi esifuna ukulikhetha. Ukuba sifuna ukukhetha ulwimi lweSpanish, emva koko Kuya kufuneka sitshintshe ukhetho kulwimi ukuya «eSpanish (eSpain)», kwiifomathi kufuneka sikhethe «iSpain» nakumthombo wokufaka uphawu ukuphawula ukhetho «iSpanish». Ukuba sifuna ukutshintsha ulwimi kubo bonke Ubuntu kufuneka sitshintshe iindlela ezintathu, ukuba asenzi njalo, mhlawumbi ukhetho okanye inkqubo ayiguquleli ngokuchanekileyo kwaye iyibonisa kulwimi oludlulileyo. Apha sithethe ngolwimi lwaseSpain kodwa sinokwenza isiNgesi, isiFrentshi okanye isiJamani. Nabani na uyahambelana.
Zonke ezinye iinkqubo ezifakwe apha ziya kuyenza ngokuzenzekelayo ngeSpanish okoko iiphakheji ze-l10 zenkqubo nganye ziya kukhetha ulwimi lwasespain ngenxa yolwazi olunikezwe ngu-Ubuntu. Njengoko ubona, ukutshintsha ulwimi ku-Ubuntu 18.04 yinto elula kwaye elula, elula kuneminyaka edlulileyo Ngaba awucingi njalo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Ungalutshintsha njani ulwimi ku-Ubuntu 18.04
Ingelosi uAbraham Lopez Carbajal sitsho
Ndingatshintsha njani ukusuka kwiSpanish (Spain) ndiye kwiSpanish (Mexico)? Kuba yile iseSpain, indibonisa inani ngale ndlela ilandelayo: 1.234,32 kwaye eMexico siyimele ngendlela eyi-1,234.32.
Enkosi kwangaphambili, imibuliso ...
Phendula Ingelosi uAbraham Lopez Carbajal